Gbasara anyị - Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd.
Shenzhen Alphagreen vape Co., Ltd guzosie ike na 2018 nke bụ a emeputa pụrụ iche na nnyocha, mmepe na mmepụta nke Vape Hardware. Anyị na-ahụ na Shenzhen, na-adaba adaba njem ohere. Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dị iche iche n'ụwa niile.
Anyị nwere ndị ọrụ karịrị 50, ọnụ ọgụgụ ahịa kwa afọ karịrị nde USD 24. Anyị mma-onwem ụlọ ọrụ na magburu onwe ya mma akara nile nkebi nke mmepụta-enyere anyị aka-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju.
Dị ka a n'ihi nke anyị elu àgwà ngwaahịa na guzo guzo ahịa ọrụ, anyị nwetara a zuru ụwa ọnụ ahịa netwọk na-eru North America na Europe.
Anyi bu ndi otu di egwu, ndi na eto eto, na ndi nwere oke oku.
Ebumnuche anyị bụ “Chee Nnukwu, Mara Ezigbo.” Absorb ọhụrụ echiche, nditịm akara mma, keukwu ngwaahịa nsuso ọrụ. Anyị ga-achọ iwulite ọnọdụ mmeri iji mepụta ọdịnihu dị mma
Anyị na-emeso ndị ahịa ọ bụla ịnụ ọkụ n'obi na ezi obi anyị, na-ele ndị ahịa ọ bụla anya dị ka ezigbo enyi anyị.
Anyị kpebisiri ike iji akụrụngwa dị elu iji rụpụta ngwaahịa anyị, 300k cartridges na 200k disposable pen kwa ọnwa, na-enweta ezigbo nzaghachi site na ndị ahịa.
Nyochaa Ngwaọrụ Anyị
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, cbd mkpịsị penpe, batrị vape pen, mkpofu vape pen, pen na-akwụ ụgwọ vape pen, cbd mmanụ vape disposable, 510 batrị, Ngwa niile